Sarkaal lagu diley magaalada Garoowe xili la hadal hayo in Sheekh Shariif uu booqdo – SBC
Sarkaal lagu diley magaalada Garoowe xili la hadal hayo in Sheekh Shariif uu booqdo
Posted by editor on Agoosto 28, 2011 Comments
Kooxo hubaysan ayaa caawa ku diley magaalada Garoowe ee caasimada Puntland sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka Puntland gaar ahaan kuwa PIS-ta.
Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabo Col.Xirsi Jaamac Dhangad ayaa waxaa lagu diley xaafada Waaberi ee magaalada Garoowe waxaana la xaqiijiyey inay baxsadeen kooxihii dilka sarkaalka geystey.
Dilka Marxuum Col. Xirsi ayaa ku soo aadayaa iyadoo amaanka magaalada Garoowe caawa uu ahaa mid si weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan kaasi oo lagu sheegay in uu magaalada Garoowe booqasho ku imaanayo madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Warar aan si buuxda loo xaqiijin ayaa sheegaya in uu jiro qorshaha safarka Madaxweynuhu uu ku imaanayao Garoowe oo haatan ku sugan yahay Ra’isalwasaare Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas).
Xiriiro aynu isku daynay inaan la sameyno masuuliyiinta madaxtooyada Puntland oo ku aadan wararka booqashada Sheekh Shariif ayay inoo suurtagali wayday, waxaase jira warar isa soo taraya oo sheegaya in uu jiro dhaqdhaqaaq ka socda xarumaha maamulka oo ku aadan safarka Madaxweynaha dawlada KMG.
Hadii ay dhacdo booqashada Sheekh Shariif ee magaalada Garoowe waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu ku yimaado deegaanada Puntland tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo doortey bishii January 2009, iyadoo uu mudooyinkii la soo dhaafay taagnaa khilaaf u dhaxeeyey madaxda Puntland & madaxda dawlada KMG gaar ahaan Sheekh Shariif, iyadoo isu soo dhawaanshaha labada dhinac uu ka imaanayo Ra’isalwasaaraha cusub oo ka soo jeeda deegaanada Puntland, isla markaana isku hawlaya sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen Puntland & dawlada KMG.